Somalia oo jawaab dabacsan siisay Kenya | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Somalia oo jawaab dabacsan siisay Kenya
Somalia oo jawaab dabacsan siisay Kenya
War saxaafadeed kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa si dabacsan looga jawaabay cadaadiska Kenya ay ku hayso dowladda Federaalka ee Soomaaliya.
Balse warka dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu muujiyay walaaca ay ka qabaan go’aanka Kenya oo keli ah.
“Dowladda Soomaaliya waxay si gaar ah uga walaacsantahay in xubno ka tirsan dowladda Soomaaliya oo dhowaan u safray magaalada Nairobi, kuwaas oo ay ku jireen wasiirro iyo xildhibaanno, ay xinnibaad ku sameeyeen saraakiil ka tirsan hay’adda socdaalka Kenya, Baasaboorradoodii laga qaaday, ka dibna dib loogu soo celiyay Muqdisho,” ayaa lagu yiri qoraalka.
Dowladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa si u xaalad dejin ah uga hadashay go’aankaasi waxayna tiri: “Dowladda Soomaaliya waxay muujinaysaa walaaca ay ka qabto in dib loo soo celiyay baaritaanka dheeriga ah ee lagu sameynayo Soomaalida safarka ku aadda Nairobi, iyada oo qasab looga dhigay inay magaalada Wajir ku hakadaan, si baaritaan amni loogu sameeyo.”
“Dowladda Soomaaliya waxaa dhankeeda ka go’an inay ilaaliso xiriirka saaxiibtinimo ee ay la leedahay dowladda Kenya, waxayna sii wadi doontaa soo dhaweynta muwaadiniinta iyo saraakiisha dowladda Kenya ee Soomaaliya imanaya”, ayaa lagu yiri warsaxaafadeedka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya.
Previous articleTirada Dadkii ku dhintay Qaraxii Maanta
Next articleXog: Spectrum iyo Som Oil and Gas oo malaayiin dollar siiyey Farmaajo iyo Kheyre